Notsapainay ny LG Spirit tao amin'ny MWC 2015 | Androidsis
Manohy amin'ny Kongresy Iraisam-pirenena Momba ny finday izahay mampiseho anao ny vaovao rehetra izay efa nentin'ireo mpanamboatra lehibe. Amin'ity tranga ity dia anjaran'ny LG sy ny eo anelanelany. Vao tsy ela akory izay ny mpanamboatra Koreana dia nanolotra ny fantsom-pifandraisana afovoan-tany vaovao.
Ary, satria tsy misy roa tsy misy telo, toy ny nandinihantsika ny LG Magna sy ny Lg leon, fotoana izao hanaovana a famakafakana tena feno amin'ny LG Spirit, eo afovoany miaraka amina endrika mamaky tany sy tena manintona. halahelo azy ve ianao?
Famolavolana miolaka be amin'ny fomban'ny LG G Flex 2
Iray amin'ireo antsipiriany izay nanintona antsika indrindra tamin'ny LG Spirit ny azy famolavolana miolakolaka. Ary, na eo aza ny maha terminal eo anelanelany azy, ny mpamokatra Koreana dia nisafidy famolavolana mitovy amin'ny an'ny LG G Flex 2, manome ny LG Spirit fikitihana tokana sy mampiavaka.
Ankoatr'izay, ny zava-misy fa ilay fitaovana dia manana bokotra fanaraha-maso ny haavon'ny feo sy ny heriny ao aoriana manafaka ny sisin'ny fitaovana manome fikitika mahaliana ny famolavolana ny fitaovana.
Raha ny fahombiazan'ny zava-bita, ny LG Spirit dia hanakona ny eo anelanelany noho ny sariny 4.7 santimetatra izay mahatratra ny famahana ny HD ary ny hakitroky ny pixel 312. Tahaka ireo rahalahiny kely, ny fony dia hoforonina Qualcomm Snapdragon 410 SoC, ankoatry ny fananana 1 GB fitadidiana Ram sy fitehirizana anatiny 8 GB azo ahitam-bokatra amin'ny alàlan'ny karatra micro SD-ny.
Tsy afaka manadino ny momba anao izahay Fakantsary lehibe 8 megapixel, mihoatra ny ampy hamaliana ny filan'ny ankamaroan'ny mpampiasa. Asongadino ny fakantsary an-tsary 1 megapixel eo alohan'izay ahafahanao maka sary mihetsika amin'ny alàlan'ny fihetsika.
Na dia tsy mbola nanamafy ny vidin'ny LG Spirit aza i LG, raha raisina ireo toetra teknika an'ity fitaovana ity dia antenainay fa ho eo anelanelany ny vidiny 120 sy 180 euro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » LG » MWC 2015: OS asehontsika amin'ny horonan-tsary ny LG Spirit